१८ दिन बाकी, मलेसियाले पुन: क्यालिब्रेसन कार्यक्रम नथप्ने घोषणा ! - jagritikhabar.com
१८ दिन बाकी, मलेसियाले पुन: क्यालिब्रेसन कार्यक्रम नथप्ने घोषणा !
मलेशिया इमिग्रेशनले डिसेम्बर ३१ २०२१ मा समाप्त हुने अवैधानिक आप्रवासी पुन: क्यालिब्रेसन कार्यक्रम योजनालाई अझै समय नथपिने भएका छन् ।
मलेशिया इमिग्रेशनका महानिर्देशक दातुक खैरुल जाइमी दाउदले आज मेडिया विज्ञप्ति मा यो जानकारी दिएका थिए।
मलेशिया इमिग्रेशन महानिर्देशक दातुक खैरुलले रोजगारदाताहरूलाई अन्तिम समय सम्म न कुरी कन छिटो यो सुविधाको पूर्ण उपयोग गर्न आग्रह गरेका छन् ।
इमिग्रेशन ले अटेरी गर्ने रोजगारदाता हरु लाई पछि धेरै समस्या आउने बताएका छन् ।
इन्डोनेसियाले आगामी महिना आफ्ना ५ हजारदेखि १० हजार नागरिकलाई मलेसियामा काम गर्न पठाउने भएको छ ।
मानव संसाधन मन्त्री दातुक सेरी एम. सरावननले भने सबै इन्डोनेसिया कामदार निर्माण क्षेत्रमा उत्पादन क्षेत्रमा काम गर्ने र घरेलु कामदारहरू समावेश छन्।
सरावननले पीडीआई कर्मचारीहरूको भविष्य जोगाउन निकट भविष्यमा श्रम विभागअन्तर्गतको विशेष समिति गठन गरिने बताए।
‘यो छलफलपछि सरकारको पहल हो र हामीले इन्डोनेसियाका कामदारको सुरक्षाका लागि सहमति जनाएका छौं, त्यसैले हाम्रो प्रतिबद्धता पूरा गर्न समिति गठन गर्नु हाम्रो दायित्व हो,’ उनले थपे।